FIFA oo garoon caalami ah u aqoonsatay Garoonka kubadda Cagta ee Muqdisho Stadium – HalQaran.com
Muqdisho (Halqaran.com) – Xiriirka kubadda cagta Adduunka ee FIFA ayaa garoonka kubadda cagta ee Muqdisho Stadium u aqoonsaday garoon caalami ah, kaasi oo marti gelin kara kulamada heerka caalami ah oo ay Xulka Qaranka dalkeena la ciyaaraya xulalka kale ee dunida.
Xulka Qaranka Soomaaliya ayaa hadda kaddib soo afjari doona kulamadi guriga u ahaa ee ay ku ciyaari jireen dalka dibadiisa, gaar ahaan dalka Jabuuti, waxaana wixii hadda ka dambeeya ay lugta labaad ku marti qaadi doonaan gudaha dalkeena Soomaaliya.
Guddoomiyaha xiriirka kubbadda Cagta ee Soomaaliya, Cabdiqani Siciid Carab oo la hadlay laanta Af Soomaaliga ee BBC-da ayaa sheegay in FIFA ay guddoonsiisay garoonka Muqdisho Stadium shahaado muujineyso in uu waafaqsan yahay nidaamka kubadda cagta ee caalamiga ah.
“Wuxuu garoonkeena ku guuleystay in lagu qaban karo ciyaaraha caalamiga ah ee kubadda cagta haddey noqon laheyd kuwa FIFA ay qabanqaabiso ama haddii ay noqon laheyd kuwa qaaradda Afrikaba” ayuu yiri Cabdiqani Saciid Carab.
Garoonka Caalamiga ah ee Kubadda Cagta ee Muqdisho Stadium
Xulka kubadda cagta ee Soomaaliya ayaa ku dheeli doonaa garoonka Muqdisho Stadium maadama markii hore ay ku dheeli jireen garoomada ku yaalla Jabuuti xilliyada ay socdaan ciyaaraha caalamiga ah.
Sii-hayaha Wasiirka Cayaaraha iyo Dhallinyarada ee Xukuumadda Soomaaliya Marwo Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa soo dhaweysay in xiriirka kubadda cagta adduunka garoonka Muqdisho Stadium u aqoonsaday mid heer caalami ah.
Tags: Cabdiqani Saciid Carab, Garoonka kubadda cagta ee Muqdisho Stadium oo FIFA garoon caalami u aqoonsatay